Meydka Sareeya Guud Jeneral Maxamed Cali Samatar oo Muqdisho la keenay (SAWIRRO) – STAR FM SOMALIA
Waxaa goor dhaweyd Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho laga soo dejiyay Meydka Allaha u naxariistee Sareeyo Guud Jeneral Maxamed Cali Samatar oo dhawaan ku geeriyooday dalka Mareykanka.
Ciidamada Xooga dalka Somaliya oo lagu diyaariyay Garoonka Aadan Cadde, ayaa astaanta Qaranka dalka waxa ay ku soo dhaweeyeen meydka Marxuumka oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu aaso isla Magaalada Muqdisho.
Madaxda Dowladda Somaliya ayaa ku sugnaa Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Muqdisho, xilliga la soo dejinaayay meydka Marxuumka.
Sida qorshaha uu yahay waxaa lagu wadaa in aas Qaran loogu sameeyo Magaalada gudaheeda, balse ilaa hada ma cadda rasmi ahaan goobta lagu aasaayo, inkastoo Ciidamada ammaanka ay xireen wadooyin dhowr ah oo Magaalada ka tirsan.
Wararka qaar ee soo baxaya ayaa sheegaya inay suuragal tahay in xarunta Wasaarada Gaashaandhiga Somaliya aas Qaran loogu sameeyo Marxuum Maxamed Cali Samatar.
Ammaanka Xarunta Wasaarada Gaashaandhiga ayaa si weyn loo adkeeyay, guud ahaana waxaa la xiray wadooyinka ku dhaw Wasaarada Gaashaandhiga oo saaka aroortii ciidamo badan la geeyay.